Events | Stars & Models Int'l - Myanmar Events – Stars & Models Int'l – Myanmar
Stars & Models Int’l Yangon မှ ပုံမှန်သင်တန်း ပြန်ဖွင့်မည့်ရက်ကို အသိပေးကြော်ငြာခြင်း
Stars & Models Int’l Yangon ၏ Modelling Class ကို 1. July. 2020 ရက်နေ့မှ စပြီး ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်သွားပါမည်။
သင်တန်းချိန်အား မနက် 11:00 AM to 1:00 PM နှင့် နေ့လည် 2:00 PM to 4:00 PM တရက်ကို အတန်းချိန် (၂)ချိန် ခွဲပြီး ဖွင့်လှစ်သွားပါမည်။ ထို့အပြင် Class တစ်ခုကို (၁၅)ဦးသာ လက်ခံပြီး Social Distance Learning အရ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
သင်တန်းရက်မစခင် စာရင်းသွင်းကြိုတင်အပ်နှံလိုပါက June လအတွင်း ပုံမှန်နေ့စဉ် Mon to Sat မနက် 10:00 Am မှ 4:00 PM အတွင်း သင်တန်းတက်ရောက်လိုသူများ လာရောက်အပ်နှံလို့ရပါသည်။ အတန်းချိန် (၂)ချိန်တွင် မိမိတက်ရောက်လိုသည့်အချိန်ကို ငွေကြိုတင်သွင်းကာ စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း ကြော်ငြာအပ်ပါသည်။
Contact ASAP – Ma Cho Mar San (09970481970), Ko Htun Naung (09425277596)